Ungachinja sei PIN ye iPhone yedu: nhanho nhanho dzidziso | Gadget nhau
Jordi Gimenez | | Nhare
Izvi, izvo zvingaite senge zvakapusa kuvashandisi vazhinji, zvakaomarara neshanduko idzo Apple inoshandisa mumamenyu ayo kubva kune akasiyana mavhezheni eIOS atinayo. Ndosaka zvakakosha kuti uzive kuti imwe neshanduro dzinogona kushandura iyo nzvimbo sarudzo isu tisingazvione, saka nhasi tichaona kuti tingaite sei chinja yedu SIM kadhi PIN mushanduro dzichangoburwa dzeApple's OS.
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kutaurwa kuti nekufamba kwenguva marongero atinowana mu iPhone akawedzera uye ndosaka muApple dzimwe sarudzo dzichichinja nzvimbo nguva nenguva. Icho chokwadi ndechekuti kare iyi sarudzo yekumisikidza yaive "yakapusa" kutsvaga, ikozvino zvinogona kudhura zvishoma kuti uwane zvisinei nekuti kwete chimwe chinhu chatinoshandisa zuva nezuva.
Izvi zvinogona kunge zviri izvo chaizvo dambudziko, nekuti kusafanirwa kugara uchichinja PIN iyi sarudzo yakavanzwa pakati pemamenyu uye pakupedzisira inoramba iri munzvimbo yatisingatarisiri. Mune vhezheni nyowani yeIOS 12 kana yakakwira sarudzo yacho yakati wandei yakavanda kupfuura zvakajairwa, saka nhasi kubva kuActualidad Gadget tichaenda kunoona neiyi dzidziso maitirwo aungaita kana kushandura PIN yeSIM kadhi rako pa iPhone yako kana iPad nemhando dzakasiyana dzeIOS.
1 Izvo zvakakosha kuti uve nePIN pane iyo iPhone kana iPad
2 Chinja SIM PIN muIOS 12 kana kupfuura
3 Chinja SIM PIN pane iOS vhezheni pamberi pane iOS 12
4 PUK kuitira kurasikirwa nePIN
Izvo zvakakosha kuti uve nePIN pane iyo iPhone kana iPad
Iyo PIN ndiyo inobvumidza vashandisi kuvharidzira vachishandisa kodhi yekuzivisa kubva pakufona kana kushandisa nharembozha. Iyi kodhi inonyanya kukosha mune yekurasikirwa kana kuba kwei iPhone yedu, nekuti inotibvumidza chengetedza SIM yedu uye nekudaro kudzivirira vamwe kuti vasashandise kufona kana kushandisa data renhare. Kana iyo PIN yekutanga yapinda, kana iwe ukatangazve chishandiso kana kubvisa SIM kadhi, iyo SIM kadhi inokiyiwa otomatiki uye iwe uchaona "SIM yakavharirwa" mune status bar.
Panguva iyoyo, kana iwe usingazive iyo PIN, haugone kushandisa iyo SIM kusvikira waiinura uchishandisa iyo PUK kodhi (iyo yatichataura nezvayo panoperera dzidziso), saka zvinofanirwa kucherechedzwa kuti izvi ndizvo kodhi yakakosha kwazvo kwatiri uye isu tinofanirwa kuzvirangarira. Usaedze kufungidzira SIM PIN nekuti tikakanganisa, iyo SIM kadhi ichavharwa kudzamara tave nePUK uye tinokwanisa kuivhura.
Chinja SIM PIN muIOS 12 kana kupfuura
Isu tinotanga neyazvino vhezheni yeApple's inoshanda sisitimu uye nekudaro neIOS 12 kana kupfuura. Mune iyi vhezheni, sezvatakambotaura pakutanga, Apple yakachinja nzvimbo yesarudzo iyi uye isu tinogona kubatanidzwa tichifunga kuti iri mumafoni efoni, sezvazvaive muiyo yapfuura iOS.
Ichokwadi kuti nzvimbo yacho haina kushamisa uye zvine musoro kuti iripano, asi chokwadika, yekutanga yesarudzo dzatichazotsvaga menyu yekuchinja PIN ichave imwe. Nzvimbo nyowani iri Nharembozha. Saka kuti tichinje SIM PIN tinofanirwa kuita nhanho idzi:
Isu tinowana Zvirongwa
Ngatiendei kune Mobile data
Pazasi tichaona SIM PIN
Zvino kana tangova mukati, sarudzo mbiri dzinoonekwa dziripo. Kana isu tiine iyo PIN inoshanda, cheki inoonekwa iri girini kumusoro, kana isu tisina iyo inoshanda inoonekwa iri grey. Pasi pazasi isu tine sarudzo Chinja PIN, izvo chaizvo zvatiri kuda kuita. Kuti tishandure SIM PIN tinofanirwa kuziva iyo yazvino kodhi uye kana tangodzvanya pa «Chinja PIN», sarudzo yekuisa iyo PIN iripo inoonekwa
Chinja SIM PIN pane iOS vhezheni pamberi pane iOS 12
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo chaiyo nzvimbo yekuisa iyi yekumisikidza sarudzo haina kushata muMobile data futi, asi kare mu iPhone ne iPad iwe waigona kushandura PIN yeSIM kadhi kubva pazvirongwa mukati meiyo foni sarudzo. Mune ino kesi, zvinoita sekunge isu inzvimbo yakabudirira yekuchinja iyo PIN, asi izvi hazvitsamire patiri uye Apple ikozvino inozviwedzera mune imwe saiti kubva kuIOS 12. kuitira kuti iwane sarudzo munzvimbo imwechete seiyo iyo iPad izvo zvisina mafoni eFoni. Saka kuti uchinje PIN muIOS pamberi peIOS 12 uchafanirwa kupfuura:
Zvirongwa> Runhare> SIM PIN. Kana iwe uine iyo iPad, enda kune Zvirongwa> Nharembozha> SIM PIN (inova ino nzvimbo yemunhu wese)
Isu tinoshandisa kana kumisa iyo SIM PIN
Tichafanirwa kuisa iyo SIM PIN
Kana isu tisati tamboshandisa imwe kubvira panguva yekumisikidza iPhone yedu isu tanga tisina SIM PIN inoshanda, isu tichafanirwa kuisa iyo yakasarudzika SIM PIN yeanoshanda yedu iyo inowanzo kuve iri pakadhi pachayo kana pabepa ravanoti tipe kubva kune anoshanda. Ipapo tichava nesarudzo yekuchinja iyi PIN. Muchiitiko chekuti isu hatizive yekutanga SIM PIN Zvichava zvakafanira kubvunza zvakananga neanoshanda kuti awane mhinduro. Zvekare tinofanirwa kutaura kuti kuyedza kufungidzira iyo PIN haisi zano rakanaka uye mune iyi kesi usina PUK, kunyangwe zvishoma.
PUK kuitira kurasikirwa nePIN
Iyi kodhi inowedzerwa kune ese maSIM uye ayo anoshandiswa kuvhura iyo PIN yeSIM yedu kana tikakanganisa kanopfuura katatu mukuisa kodhi kana kusarangarira. Iyi kodhi inowanzo kusungirirwa kumakadhi pachawo uye kunyangwe chiri chokwadi chiri kashoma kudikanwa, zvakakosha kuichengeta zvakanaka kuitira kuti tizoida rimwe zuva.
Vashandisi vezvino vanogona kutipawo kodhi iyi kuitira kana tisina kadhi kana bepa naro, saka usazvidya moyo kana usiri kuiwana. Kuti tiite izvi, tinofanirwa kufonera opareta watinaye zvakananga uye tichikumbira kuti vatipe kodhi yePUK. Ive nekuchenjerera nekuti iyi PUK inogona zvakare kuoneka se "PUK yakaneta", uye mune izvi zviitiko chete chinhu chatinogona kuita kukumbira SIM kadhi nyowani, inova imwezve musoro.
Sezvatakambotaura pakutanga, haisi sarudzo yatinoita mazuva ese ekuchinja iyo PIN pane yedu iPhone, asi zvakakosha kuti ujekeswe pamusoro penzvimbo iyo sarudzo yekugadzirisa kana kushandura iripo uye kujekesa nezve chii zvinoitika patinokanganisa patinodzvanya kakawanda zvisizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Nhare » Ungachinja sei pini pane iPhone
Energy Sistem inovhura vatatu vatauri vane integrated Alexa mubatsiri